Talata 14 Mey 2019. – FJKM
Talata 14 Mey 2019.
Fandalinana ny Boky ASAN’ ny APOSTOLY
Asan’ny Apostoly 1.15-26
Asan’ny Fanahy Masina ny fanendrena ny olona iray ho amin’ny fanompoana an’ Andriamanitra .
Mampahafantatra antsika amin’ny fomba miavaka ny bokin’ny Asan’ny Apostoly raha ny fiasan’ny Fanahy Masina manokana no jerena . Izy no nanendry izay ho solon’i Jodasy (and26). Tsy afa-misaraka amin’ny fiainam-bavaky ny mpianatra anefa izany fikatsahana ny sitrapon’ Andriamanitra izany (and24).
Manaitra ny saina ny mahafantatra fa ny Fanahy masina no efa nanindry mandry an’i Davida (Sal 109.8) ny amin’i Jodasy . Mariho tsara fa 1010 taona mialoha izany faminaniana izany . Tena Andriamanitra tokoa ny Fanahy masina .
Aza omena ho an’ny hafa ny zara fanompoanao
An’ny Tompo ny Fiangonana. Izy no niantso sy nanendry ny olona araka ny nahim-pony malalaka . Matoa misy seham-panompoana nametrahany olona dia misy filàna sy asa miandry eo izany . Raha sendra tojo fahabangana izany noho ny antony maro samihafa dia aza manahy fa tadiavo amin’ny alalan’ny fiombonam- bavaka izay ho fitarihana vaovao omen’ny Fanahy Masina. Tsy misy olona tsy hainy soloina . Azy ny asa …noho izany miantoka ny hampandehanana izany Izy .
Alahady 18 Aogositra 2019.
Sabotsy 17 Aogositra 2019.
Zoma 16 Aogositra 2019.
Alakamisy 15 Aogositra 2019.
Alarobia 14 Aogositra 2019.
Talata 13 Aogositra 2019.
Alatsinainy 12 Aogositra 2019.
Alahady 11 Aogositra 2019.
Sabotsy 10 Aogositra 2019.
Zoma 09 Aogositra 2019.
| | 18. Alah IX man.Trinite / Aumonerie Nas
Jos 6.20-23 / Mar 5.25-34 / Heb 11.1-12